Flim2MM: June 2016
X-men မင်းသားကြီး Hugh Jackman ရဲ့ ဇာတ်ကားကောင်းတကားဖြစ်ပါတယ်။ Van Helsing ဇာတ်ကားဟာလည်း Van Helsing2ထွက်ပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ မကြည့်ရသေးသူတွေကြည့်ရအောင် 1 ကိုပဲ အရင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်မှ...
အညွန်းကိုပြောရရင်တော့van helsingဆိုတဲ့ဗင်ပိုင်းယားမုဆိုးတစ်ယောက်အကြောင်းပါ။နှစ်လေးရာ သက်တမ်း ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့စွမ်းအားကြီးမားတဲ့ ဗင်ပိုင်းယားတစ်ကောင်ကို ဘယ်လိုနှိမ်နင်းလဲဆိုတာ
ကိုစိတ်ဝင်တစားကြည့်ကြရမှာပါ ပီးတော့သွေးစုပ်ဗင်ပိုင်းယားလင်းနို့တွေရယ် လူတစ်ပိုင်း ဝံပုလွေတစ်ပိုင်းတွေရယ် အချစ်အလွမ်းရသပေါင်းစုံ ပါဝင်တာကြောင့်လက်မလွတ်သင့်တဲ့ ဇတ်ကားကောင်းတစ်ကားလို့ ပြောလိုက် ပါရစေ
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - ကိုစိုးထွေး
IMDB 6.0 ရထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 2h:11mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 606 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 11:55:00 PM 1 comment:
Posted by Y Junction at 10:57:00 PM 1 comment:
Posted by Y Junction at 9:32:00 AM No comments:
၁၉၉၀ တုန်းကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Ghayal ဇာတ်ကားရဲ့ အဆက်လို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ မင်းသားကြီး
Sunny Deol ပဲအဓိကသရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ဇာတ်ညွှန်းရေးပြီး၊ သူကိုယ်တိုင် ဒါရိုက်တာလုပ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံက နာမည်ကြီးလုပ်ငန်းရှင်သူကြွယ်ရဲ့သား သေနတ်နဲ့ လူတယောက်ကို ပစ်သတ်တဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ဟာ သူငယ်ချင်းလေးယောက်ဆီမှာရှိနေပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုပြန်လိုချင်နေတဲ့ သူကြွယ်ကလည်း နယ်နယ်ရရမဟုတ်ပဲ အစိုးရဝန်ကြီးကိုတောင် အိပ်ကပ်ထဲထည့်တားနိုင်တဲ့အဆင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ ရောက်နေတဲ့ လူငယ် ၄ယောက်အနေနဲ့ ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကို လုံးဝယုံကြည်ရတဲ့ သူတယောက်ဆီကိုပေးအပ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။ သူကတော့ အမှန်တရားဘက်ကနေ အမြဲရပ်တည်ပြီး မတရားခံရသူတွေဘက်က ပေးဆပ်ပေးနေတဲ့ အဂျေးမဟ်ရ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာ အခြေအနေတွေက ပိုဆိုးလာပါတော့တယ်။ အဂျေးအနေနဲ့ အင်အားကြီးမားတဲ့ ရန်သူကိုရင်ဆိုင်ဖို့ လုံးဝကို စေတနာ့ဝန်ထမ်းဖြစ်သွားပါတော့တယ်။
ခံစားမှုနဲ့ အသိတရား အစုံပေးနိုင်တဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းကားတကားပါ။ ဒီကားကိုတော့ DVD အခွေမှ rip လုပ်ပြီး ပြန်လည်တင်ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ အချို့နေရာတွေမှာ ဘာသာပြန်ပေးထားတာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အရေးကြီးနေရာတွေမှာတော့ မလစ်ဟင်းပါ။ ဖိုက်တင်ခန်းတွေက ခပ်ကြမ်းကြမ်းကြီးတွေဖြစ်ပြီး ဇာတ်လမ်းရဲ့ ၁၅ မိနစ်လောက်မှ ဇာတ်ရည်လည်ပြီး ရှင်းလင်းသွားပါလိမ့်မယ်။
IMDB 7.0 ရထားတဲ့ အက်ရှင်ကားဟာ 2h:07min ကြာမြင့်ပါတယ်။ 599 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 12:46:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 12:43:00 AM No comments:
JarHead3ထွက်ပြီဆိုပေမယ့် အရင်ဆုံး ရှိနေတဲ့ JarHead2ကို အရင်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ နောက်မှ3ကိုတင်ပေးပါတော့မယ်။ JarHead2Field of Fire ကို ပထမကား ထွက်ရှိပြီး9နှစ်အကြာမှာ မှ ရိုက်ကူးခဲ့ပေမယ့် ဇာတ်လမ်းက ဆက်စပ်မှုရှိပါတယ်။ ပထမကားဖြစ်တဲ့ jarhead မှာ မရိန်းတပ်သားသစ် တစ်ယောက်ရဲ့ဘ၀ကိုအသေးစိတ်ရိုက်ကူး ပြသခဲ့ပြီး အခု ဒုတိယမြောက်ဇာတ်ကားမှာတော့ လက်တွေ့ စစ်ဆင်ရေးဘ၀ထဲက မရိန်းတပ်သားတွေရဲ့ အမိန့်နာခံမှု ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်ခိုင်မာမှု ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ လျှပ်တပြက်အခြေအနေတွေအပေါ်မှာ မူတည်ပြီး အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ရဲ့ ဖြတ်ထိုးညဏ်ကောင်းမှုတွေကို ရှုမြင်ခံစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
‎Sharia Law (ရှာရီယာဥပဒေ) ကိုချိုးဖေါက်ပြီး ပညာသွားသင်တဲ့ ပါကစ္စတန် အမျိုးသမီး တစ်ယောက်ကို အသေရရ အရှင်ရရ လိုချင်နေတဲ့ တာလီဘန် စစ်သွေးကြွတွေ လက်ထဲက ကယ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရင်း တိုင်းသားရင်း ဒေသခံတွေနဲ့ တာလီဘန်တွေ ကြားထဲမှာ ဗျာများခဲ့ရတဲ့ အမေရိကန် မရိန်းတပ်သားတစ်ဖွဲ့ရဲ့
စစ်မြေပြင်မှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ပုံကို .ဆက်လက်ခံစားကြည့်ရှုလိုက်ပါဦး။ မိသားစုတွေအတူတကွ ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - http://mamanipiggyjapu.blogspot.com
IMDB 5.5 ရရှိထားတဲ့ စစ်ကားဟာ 1h:43mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ 660 MB နဲ့ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:21:00 PM No comments:
1986 တုန်းက လေယာဉ်ပြန်ပေးဆွဲခံရတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ကို အခြေခံ ပြီး ရိုက်ကူးထားတဲ့ Neerja (2016) ဟာ imdb rating 8.2/10 အထိ ရရှိထားလို့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဆိုတာတော့ အသေချာအပါဘဲ။
လှပပြီး နူးညံ့တဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးတယောက်အနေနဲ့ အကြမ်းဖက်သမားတွေလက်ထဲက လေယာဉ်စီးခရီးသည် 359 ယောက်တို့ရဲ့ အသက်ကို ဘယ်လို ကယ်တင်ကြမလဲ အကြမ်းဖက် သမားလက်ထဲကနေ လွတ်မြောက်မှာလား ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့ ဆက်လက်ရှုစားကြပါဦး။
IMDB 8.2 ရရှိနေတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 2h:2mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 537 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 2:57:00 AM No comments:
Labels: Biography, Bollywood, Drama, Thriller
Table No.21 : Vivaan နဲ့ Siya ဇနီးမောင်နှံ ကံကောင်းချိန် ရောက်လို့ ပိတ်ရက်ရှည်မှာ Fiji ကို စရိတ်ငြိမ်း လည်ပါတ်ခွင့် ကံစမ်းမဲ ပေါက်ခဲ့ပါတယ်။ Fiji မှာ အကောင်းစား Hotel ကြီးမှာ နေခွင့် ရသလို ကောင်းပေ့ ဆိုတဲ့ အစား အသောက်တွေ စားပြီး ပူပူ နွေးနွေး အလုပ်ပြုတ်ထားတဲ့ Vivaan တစ်ယောက် အပူတွေ မေ့ပြီး ပိတ်ရက်ရှည်မှာ ဇနီးချောနဲ့ အပျော်ကြီး ပျော်နေကြပါတယ်။
Vivaan နဲ့ Siya က ကံကောင်း ပြီးရင်း ကောင်းတယ် ပြောရမလား မသိဘူး Mr.Khan ဆိုတဲ့ resort ပိုင်ရှင် တစ်ယောက်က Vivaan တို့ အတွဲကို Tabel No. 21 ဆိုတဲ့ ဂိမ်းကို ကစား ဖို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။
ကစားပွဲ စစချင်းမှာ အရမ်းလွယ်ကူတဲ့ မေးခွန်းတွေနဲ့ ဆုကြွေးငွေ အများကြီး ရနေတော့ Vivaan တို့ အတွဲ အပျော်ကြီးပျော် သဘောတွေကျနဲ့ ပိုက်ဆံတွေ လွယ်လွယ် ရအောင် လုပ်ပေးလို့ Mr.Khan ကို ကျေးဇူး တွေတင်နေလို့ မဆုံးသေးဘူး သူတို့ ထင်ထား သလို အပျော်ကစားပွဲ မဟုတ်ပဲ အကွက်ချ စီစဉ်ထားတဲ့ ကစားပွဲမှန်း သိတော့ အချိန်က လွန်နေပြီ။
ဘာကြောင့် ဒီကစားပွဲကို သူတို့နဲ့မှ ကစားရတာလဲ အဖြေကို Vivaan တစ်ယောက် စဉ်းစား မရဖြစ်နေချိန်မှာ ကျောင်းသား ဘဝက ဖြစ်ပျက်မှု အချို့က ကစားပွဲ ထဲမှာ ပါလာတော့ ဒါဟာ အကွက်ချ စီစဉ်ထားတဲ့ ကစားပွဲ ဆိုတာထက်….
ဒါရိုက်တာ Aditya Datt ရိုက်ကူးထားတဲ့ 108 မိနစ်ရှည် Crime Thriller ဇာတ်ကား အမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ Paresh Rawal, Rajeev Khandelwal နဲ့ Tena Desae တို့ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကား ဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Movie Review Ygn
IMDB 7.1 ရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားဟာ 1h:48mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 489MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:29:00 AM No comments:
Labels: Adventure, Bollywood, Thriller
အားလပ်ရက် မိုးအေးအေးနဲ့ အိမ်ထဲမှာသရဲကားကြည့်လို့ရအောင် ဘောလီးဝုဒ်သရဲကားတင်ပေးလိုက်ပြီနော်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ အာရှတိုက်က အကြီးဆုံး ရှော့ပင်းမောလ်တခုဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားမှာ ခြောက်လှန့်မှုတွေနဲ့ သဘာလွန်ဖြစ်ရပ်တွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ အဲ့ဒီမောလ်မှာ လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းအသစ်တယောက်အနေနဲ့ အဲ့ဒီခြောက်လှန့်မှုတွေကို ဘယ်လိုရပ်တန့်အောက်လုပ်မလဲဆိုတာကိုတော့...
IMDB 5.1 ရထားတဲ့ ဘောလီးဝုဒ်သရဲကားဟာ 2h:4mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 565 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 1:46:00 AM No comments:
Labels: Bollywood, Horror, Thriller
မင်းသားကြီး Nicolas Cage ရဲ့နောက်ဆုံးထွက်ရှိတဲ့ 2016 ကားအသစ်ပါ။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းကတော့ ရဲနှစ်ယောက်အနေနဲ့ မူးယစ်ဆေးဝါးအမှုတခုမှာ ပါဝင်ပါတ်သတ်ခဲ့ပြီး ၄င်းအမှုအတွက်ကိုယ်တိုင် ပြန်လည် အဆုံးသတ်ရပုံကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။
IMDB 5.4 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 1h:32mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 423 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 11:58:00 PM No comments:
Posted by Y Junction at 9:27:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 9:01:00 AM No comments:
မင်းသားကြီး အမိတာဘဂျမ်းနဲ့ ဆလာမာခမ်း တို့ပါဝင်ထားတဲ့ ဒရမ်မာကောင်းကောင်းလေးတလက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းအနေနဲ့ သေဆုံးသွားတဲ့ သားအတွက် စိတ်သောကရောက်နေတဲ့ ချွေးမကို ပျော်ရွှင်မှုတွေပြန်လည်ရရှိအောင် ကြိုးစားခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းပါ။
IMDB 5.4 ရရှိတဲ့ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်လမ်းဟာ 2h:49min ကြာမြင့်ပါတယ်။ 776MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 1:32:00 AM No comments:
ဒီဇာတ်ကားဟာ Transformers ဇာတ်ကားတွေရဲ့ ဖန်တီးရှင် Michael Bay ရဲ့ လက်ရာပါ။တကယ့်အဖြစ်အပျက်ကို ရိုက်ကူး ထားတာဖြစ်ပြီး 2013 က ထွက်ခဲ့တဲ့ Zuckoff ရဲ့ 13 hours စာအုပ်ကို အခြေခံထားပါတယ်။
လစ်ဗျားနိုင်ငံဘန်ဂါဇီ မြို့မှာရှိတဲ့ အမေရိကန်ကောင်စစ်ဝင်ရုံးကို 2012 ခုနှစ်ကအစ္စလာမ်းမစ် စစ်သွေးကြွတွေ ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီလို ၀င်ရောက်တိုက်ခိုက်စဉ်အတွင်း အမေရိကန် သံတမန်တစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။
အဲဒီနောက် အမေရိကန် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ က အစ္စလာမ်းမစ် စစ်သွေးကြွတွေကို ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ပြီး 13 နာရီကြာအောင်ဖြစ်ပွားနေတဲ့ တိုက်ပွဲအကြောင်းကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ဒီဇာတ်ကားကိုဒါရိုက်တာ Michael Bay (မိုင်က်ကယ် ဘေး) ကရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပြီးMazMartini(မက်ဇ် မာတီနီ ), John Krasinski( ဂျွန် ကရာဆင်စကီ )နဲ့ တခြားသရုပ်ဆောင်တွေအားဖြည့်ထားတဲ့ အက်ရှင်ဒရမ်မာရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Myanmar Cable News
IMDB 7.4 အထိတောင်ရရှိထားတဲ့ စစ်အက်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ 2h: 24mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 662 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:29:00 AM No comments:
လောလောဆယ် 2016 ရဲ့အကောင်းဆုံး Bolly Wood အက်ရှင်ဇာတ်ကားလို့ပြောလို့ရပါတယ်။လူတွေကို မတရားဖမ်းဆီးပြီး ယုတ်မာရက်စက်စွာ မျက်လုံး၊ကျောက်ကပ် အစရှိတဲ့ လူခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရောင်းစားပြီး လူမမယ် ကလေးတွေကို မူးယစ်ဆေးဝါးရောင်းချစေတဲ့လူယုတ်မာတွေအကြောင်း ရိုက်ကူးထားတာပါ။ မင်းသား John Abrahamက အေးဂျင့်တစ်ယောက်အဖြစ် သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ပညာပေးကားလေးပါ။ John ရဲ့ အက်ရှင် ပြကွက်တွေက အရမ်းကောင်းပါတယ်။ မင်းသမီးကတော့ ဧည့်သည်သရုပ်ဆောင်လောက်ပဲ ပါဝင်တာပါ။ သိပ်ကို ပီပြင်တဲ့ အက်ရှင်ခန်းတွေ လူသားခြင်း မိစ္ဆာဘီလူးပူးကပ်နေသလို ၀ိသမလောဘသားတွေကြားက လူမမယ်ကလေးငယ်တွေကို ကယ်တင်ရင်း အင်အားကြီးလူဆိုးဂိုဏ်းကို အမြစ်ဖြုတ်ရမယ့် တာဝန်တွေ ထမ်းပိုးထားတဲ့ အေးဂျင့်တစ်ယောက်ရဲ့ ဇာတ်ကြမ်း...။
အက်ရှင်ကားကောင်းကောင်းကြိုက်တတ်မယ်ဆိုရင် ဒီဇာတ်ကားကို ညွန်းဆိုချင်ပါတယ်...။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Baadshah Khan
IMDB 7.0 ထိရရှထားတဲ့ BollyWood အက်ရှင်ဇာတ်ကြမ်းဟာ 2h:06mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ အောက်ပါလင့်ခ်မှာ 570 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီး။
Posted by Y Junction at 10:22:00 PM No comments:
၂၀၁၁ က ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ အမေရိကန် ဟာသရုပ်ရှင် Horrible Bossess ရဲ့ အဆက်ဖြစ်တဲ့ ဟာသဇာတ်ကားသစ်အ ကြောင်း ဖော်ပြချင်ပါတယ်။
နစ်ခ်ဟန်ဒရစ်၊ ဒေးလ်အာ ဘက်စ်နဲ့ ကပ်ဘက်ခ်မန်းတို့ဟာ ကျေးဇူးမသိတတ်တဲ့ သူဌေးတွေ လက်အောက်မှာ အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက် ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့ပါတယ်။ Shower Buddy လို့ခေါ်တဲ့ ရေ ပန်းခေါင်းထုတ်လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမယ့်သူ ရှာတုန်း ဘာ့တ်ဟန်ဆန်နဲ့ သူ့သားရက်စ် တို့ ချဉ်းကပ်လာခဲ့ပါတယ်။ သူတို့ သုံးယောက်ရဲ့ စိတ်ကူးကို ဘာ့တ် တို့က Shower Pal နာမည်ပြောင်းသုံးပြီး လုပ်ငန်းလုပ်သွားတာကြောင့် ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုတွေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ နစ်ခ်တို့ သုံးယောက်ဟာ ထောင်ကျနေတဲ့ နစ်ခ်ရဲ့ သူဌေး ဟောင်းဒေ့ဗ်ဟာကန်ဆီကိုသွား ပြီး ငွေကြေးဆုံးရှုံးမှုအတွက် တိုင် ပင်တဲ့အခါ ပြန်ရနိုင်ခြေလမ်း ကြောင်း မရှိကြောင်း သိခဲ့ရတာ ကြောင့် ကြံရာမရတဲ့အဆုံး ရက်စ် ကို ပြန်ပေးဆွဲပြီး ဒေါ်လာငါးသိန်း နဲ့ ပြန်ရွေးဖို့ လုပ်ဆောင်ပါတယ်။ ဒေးလ်ရဲ့ သူဌေးဟောင်း ဒေါက် တာဂျူလီယာဟာရစ်ဆီက နိုက်ထရပ်အောက်ဆိုက်ဘူးကို သွားခိုးပြီး ရက်စ်ရဲ့ အိမ်ရှိ ဗီရိုမှာထဲ ပုန်းရင်း ရက်စ်ကိုပြန်ပေးဆွဲဖို့ စောင့်နေခဲ့ကြပါတယ်။
ဒေးလ်ကနိုက်ထရစ်အောက်ဆိုက်ဘူးကို မတော်တဆ ဖွင့်မိသွားတာကြောင့် သူတို့အားလုံးအိပ်ပျော်နေခဲ့ပြီး မနက်နိုးလာ တော့ ရက်စ်က အိမ်မှာ မရှိတော့ပါဘူး။ အလုပ်ရုံဘက်ကို လိုက်သွားတဲ့အခါမှာ ရက်စ်ကို သူတို့ကားထဲမှာ ကြိုးတုပ်လျက်သား တွေ့ပါတယ်။ ရက်စ်က သူတို့သုံးယောက်ဗီရိုထဲ အိပ်ပျော်နေတာ တွေ့ခဲ့တာကြောင့် သူ့အကြံအစည်နဲ့ သူပြန်ပေးဆွဲခံရသယောင်လုပ်ပြီး သူ့အဖေကို ပိုက်ဆံတောင်းဖို့ လုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ ပြောပြပါတယ်။ သူ့ကိုပြန်ရွေးဖို့ ငွေကိုဒေါ်လာငါးသိန်းအထိ တိုးတောင်းပါတယ်။
နစ်ခ်တို့ သုံးယောက်ဟာ ရက်စ်ရဲ့ အကြံအစည်ကို သိပ် သဘောကျမပေမယ့် ရက်စ်ရဲ့ အဖေဘာ့တ်ဆီကို ဖုန်းခေါ်ပြီး သူ့သားပြန်ပေးဆွဲခံရတာကို ငွေနဲ့ လာရွေးဖို့ ပြောပါတယ်။ ဘာ့တ်ဟာ သူ့သားထက်ငွေကို ပိုမက်သူ ဖြစ်တာကြောင့် ရဲကိုတိုင်လိုက်တဲ့အတွက် ရက်စ်တစ်ယောက် သူ့ အဖေအကြောင်း နားလည်သွားပြီး နစ်ခ်တို့သုံးယောက်နဲ့ ပေါင်း ပြီး သူ့အဖေဆီက ငွေရဖို့အရေး လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ လေးယောက်ပေါင်းအဖွဲ့က ဘယ်လိုဆက်လှုပ်ရှားမှာလဲ။ ဒေါက်တာဂျူလီယာက ဒေးလ်တို့ ဆီလိုက်လာတုန်း ဒေးလ်မိန်းမနဲ့ ထိပ်တိုက်တွေ့တဲ့အခါ ဘာတွေ ဖြစ်ကြမလဲဆိုတာ ကိုယ်တိုင်ရယ်ရယ်မောမောကြည့်လိုက်တာ ပိုအရသာရှိမှာပါ။ ဒီဇာတ်ကားမှာ နစ်ခ်ဟန်ဒရစ်အဖြစ် ဂျေ ဆင်ဘိတ်မန်း၊ ဒေးလ်အာဘက်စ်အဖြစ် ချာလီဒေး၊ ကပ်ဘက်ခ် မန်းအဖြစ် ဂျေဆင်ဆူဒေကစ်၊ ဒေါက်တာဂျူလီယာအဖြစ် ဂျနီဖာအန်နစ္စတန်၊ ရက်စ်အဖြစ် ခရစ္စပိုင်းတို့က သရုပ်ဆောင်ထားတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း -7Daily
IMDB 6.3 ထိရထားတဲ့ ဟာသဇာတ်ကားဟာ 1h:48mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 497 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
ဒီနေ့အတွက်တော့ ရှေးဟောင်း အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ် ခုနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။ သင်္ဘောပျက်ရာကနေ ကျွန်းနိုင်ငံ တစ်ခုပေါ် ရောက်ခဲ့ပြီး သူတို့အ သက်ဆက်လက်ရှင်သန်နေထိုင် ခွင့်ရဖို့ အဲဒီနိုင်ငံက ဘုရင့်အထူး စစ်သားတွေရဲ့ လက်ကနေ လွတ် မြောက်ခွင့်ရဖို့ ကြိုးစားကြပုံကို ရိုက်ကူးထားတဲ့ Northmen-A Viking Saga ဆိုတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်လမ်းအစမှာ Viking တစ်စုရဲ့ သင်္ဘောပင်လယ်ထဲမှာ မုန်တိုင်းနဲ့ အပြင်းအထန်ကြုံရပါ တယ်။ အဲဒီမုန်တိုင်းနဲ့အတူ သူတို့ သင်္ဘောကလည်း တစ်စစီပြိုပျက် ခဲ့ရပြီး Viking အဖွဲ့သားတွေဟာ Alba ဆိုတဲ့ ကျွန်းနိုင်ငံပေါ်ရောက် ခဲ့ပြီး သူတို့ကျွန်းပေါ်တက်တက် ချင်းမှာပဲ စစ်သည်တော်အဖွဲ့တစ် ဖွဲ့က ရန်မူဖို့ကြိုးစားတာကို ခံခဲ့ ရပါတယ်။
Viking အဖွဲ့သားတွေဟာ အဲဒီစစ်သည်တော်အဖွဲ့ကို တိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ စစ်သည်တော်တွေနဲ့ အတူပါလာတဲ့ အမျိုးသမီးငယ်တစ်ဦးကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီအမျိုးသမီးက ချောမောပြီး ၀တ်ပုံစားပုံနဲ့ သူအသုံးအဆောင်တွေကြောင့် ဒီ့နိုငံ ရဲ့ အရေးပါတဲ့ အမျိုးသမီးဖြစ်ကြောင်း သိပြီးတဲ့နောက်မှာ Viking တွေဟာ သူတို့အသက်ရှင်နေထိုင်ခွင့်ရဖို့ ဒီအမျိုးသမီးကို အသုံးချဖို့ စီစဉ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသမီးဟာ သူတို့ရောက်နေတဲ့ Alba ကျွန်းနိုင်ငံက ဘုရင့်သမီးတော်ဖြစ်နေပြီး ဘုရင်က သူသမီးကို တခြားနိုင်ငံကိုဆက်သဖို့၊ အဓမ္မပို့ လွှတ်လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအစီအစဉ် ပျက်သွားတာကို သိသွားတဲ့ Alba ဘုရင်ဟာ သူ့သမီးကို ခေါ်ဆောင်ထားတဲ့ Viking တွေကို ချေမှုန်းဖို့ သူရဲ့ အထူးစစ်သား တွေကို စေလွှတ်ပြီး ရှာဖွေစေပါ တယ်။ဘေးဒုက္ခကြုံပြီး ဦးတည်ရာ မဲ့နေတဲ့ Viking တွေကို ကျွန်းပေါ် မှာရှိတဲ့ ခရစ်ယာန်ဘုန်းတော်ကြီး တစ်ပါးက ကူညီခဲ့ပြီး သူတို့အဖွဲ့ တွေဟာ အယ်လ်ဟာဘုရင်ရဲ့ စစ်သည်တော်တွေ လက်ကနေ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်ဖို့ ကြိုး စားကြတာကို ရိုက်ကူးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဇာတ်ကား အစကနေ အ ဆုံးအထိ သတ်ပုတ်တိုက်ခိုက်ခန်း တွေ တောက်လျှောက်ထည့်သွင်း ထားပြီး စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဇာတ် လမ်းတစ်ခုအဖြစ် ဖန်တီးထားပါ တယ်။ ဒီဇာတ်ကားက ၂၀၁၄ ကတည်းက ထွက်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဖြစ်ပေမယ့် ရောမခေတ်က စစ်တပ်ဇာတ်လမ်းတွေထဲက ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့ ဇာတ်ကားကောင်း တစ်ကားဖြစ်တာကြောင့် ရွေးချယ်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
IMDB 5.3 ရထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ 1h:37mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 448 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:42:00 AM2comments:
ရုပ်ရျင်ကို အကျဉ်းရုံးပြောရရင်တော့ အိန္ဓိယသီဟတင်စိုးကားပါ။ ၁၉၇၀ ဝန်းကျင်လောက်က ဗျိတိသျှလက်အောက်ကနေ လွပ်လပ်ရေး၊ နယ်မြေပြန်ရရေးအတွက် ပြန်လည်တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ VEER ဆိုတဲ့ သူရဲကောင်းတဦးရဲ့ ဇာတ်လမ်းပါ။
မင်းသားကြီး စလာမာခန်းပါဝင်ထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 2h:49mins ထိကြာမြင့်တာကြောင့် တော်တော်လေးရှည်တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ ပိတ်သတ်ကြီးအဆင်ပြေအောင် အတတ်နိုင်ဆုံးဖိုင်ချုံ့ပြီး 747 MB နဲ့ တင်ပေးထားပါတယ်။
Posted by Y Junction at 7:07:00 AM 1 comment:
ရဲအဖွဲ့မှစုံထောက်တဦး ဆန်းကြယ်သော ကိုယ်ပျောက်အစွမ်းကိုရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာ မိမိအစွမ်းအစနှင့် အရင်က ဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်ခဲ့သူများကို ပြန်လည်လက်စားခြေတဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ 2h:13mins ကြာမြင့်တဲ့ အိန္ဒိယဇာတ်လမ်းကို 574 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:34:00 PM No comments:
Labels: Bollywood, Sci-Fi, Thriller
ယခုကိုရီးယားဇာတ်လမ်းကတော့ ကြည့်ရင်းနဲ့မှ တဖြည်းဖြည်း ရုပ်လုံးပေါ်လာမယ့်ဇာတ်လမ်းပါ။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄ နှစ်က အမှုပိတ်လိုက်တဲ့လူသတ်မှုတွေလိုမျိုး ယခုအချိန်မှာ အလားတူ ဆက်လက်ဖြစ်လို့နေပါတယ်။ မိမိကိုယ်မိမိ သတ်သေမှု၊ မခိုင်လုံမှုတွေနဲပဲ အဆုံးသတ်သွားပါတယ်၊ စုံထောက် ဂင်အနေနဲ့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁၄နှစ်က ပထမဆုံး အသတ်ခံရတဲ့လူရဲ့သားနဲ့ အိမ်နီးနားချင်း အမျိုးသမီးရဲ့ သမီးတို့ရဲ့ လျှို့ဝှက် ဆက်ဆံမှုကို အစထုတ်ပြီ အမှုမှန်ကို ဖေါ်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားရာကနေ....
IMDB 6.7 ရထားတဲ့ ကိုရီးယား ဇာတ်ကားဟာ 2h:15mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 731MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:18:00 PM No comments:
Labels: Drama, Korea, Mystery, Romance, Thriller
ဒီဇာတ်ကားကတော့ IMDB.8.1 အထိတောင်ရထားတဲ့ အောင်မြင်တဲ့ Bollywood ဇာတ်ကားကောင်းတကားပါ။ လက်ဝှေ့ထိုးတဲ့ ငါးစိမ်းသည်မ အကြောင်းပါ။ အဓီကကတော့ လက်ဝှေ့လောက ကနေ ထွက်ခွါခဲ့ရတဲ့ ဘောက်ဆင်သမားတယောက်ဟာ ငါးစိမ်းသည်မကို ကြေးစားလက်ဝှေ့သမားဖြစ်အောက် ၊ အောက်မြင်မှုရအောင် ကြိုးစားခဲ့ရတဲ့ပုံကို ပုံဖေါ်ထားပါတယ်။ သည်းခံပြီး ဇွဲကြီးလွန်းတဲ့ ဆရာနဲ့ ဂျစ်ကန်ကန်နိုင်ပြိး၊ ပေပေတေတေဖြစ်နေပေမယ့် လက်ဝှေ့အရည်အချင်းရှိတဲ့ တပည့်မ တို့ရဲ့ အောင်မြင်မှုခရီးစဉ်ကို ဘယ်လိုလျှောက်လှမ်းကြမလဲဆိုတာကိုတော့ .......
IMDB 8.1 ရထားတဲ့ဇာတ်ကားဟာ 1h: 49 mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 489 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:03:00 AM No comments:
Labels: Action, Bollywood, Drama, Sport
Posted by Y Junction at 12:32:00 AM No comments:
အချစ်ကားသီးသန့်လေးတွေကြည့်မယ်ဆိုတဲ့ ပရိသတ်အတွက် ဘောလီးဝုဒ်ဇာတ်ကားတကားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မြို့တမြို့ကိုရောက်လာတဲ့ လူငယ်လေးတယောက်ဟာ၊ ကောင်မလေးတယောက်နဲ့ တညမှာ အမှတ်မထင်တွေ့ခဲ့ရာကနေ တခါမှမခံစားဖူးတဲ့ အချစ်နဲ့ချစ်မိပါတော့တယ်။ ကောင်မလေးနဲ့ နီးစပ်အောက်ကြိုးစားပြီး ပျော်ရွှင်စရာ မှော်ဆန်တဲ့ နေ့ရက်တွေကို ပျော်ပော်ျရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းကြပါတယ်။ အချစ်စစ်တို့ရဲ့လမ်းဟာ မဖြောင့်ဖြူးဘူးဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ အခက်အခက်တွေကိုကြုံရပြီး ပရိသတ်ကြိုက်မယ့် ပျော်စရာဇာတ်သိမ်းခန်းဖြစ်မလား၊ ရင်နာစရာဇာတ်သိမ်းဖြစ်မလားဆိုတာကိုတော့......
IMDB 5.3 ရထားတဲ့ အချစ်ဇာတ်ကားဟာ 2h:22mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 631 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:38:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 1:48:00 AM2comments:
အတွဲနှစ်တွဲရဲ့ အမုန်းအတွက် အမုန်းတရားတခုကို ဖြေရှင်ဖို့ လှည့်ကွက်တွေနဲ့ ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကြမလဲဆိုတာ....
IMDB 4.4 ရထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းဟာ 2h:6mins ကြာမြင့်ပါမယ်။ 565 MB အောက်ကလင့်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 9:50:00 PM No comments:
Labels: Bollywood, Drama, Thriller
မိဘတွေ ကွယ်လွန် သွားပြီး နောက်ပိုင်း နေစရာမရှိ စားစရာမရှိ ဘဝ ရောက်နေတဲ့ Jacob တစ်ယောက် ကံကောင်းပြီ circus အဖွဲ့ တစ်ခုမှာ အလုပ် ရခဲ့ပါတယ်။ Circus အဖွဲ့ရဲ့ ပိုင်ရှင် August ဟာ circus ထဲမှာ ရှိတဲ့ သူ့ရဲ့ အလုပ်သမား တွေကို အကြောင်းပြချက် မရှိပဲနဲ့ ဆူပူ ကြိမ်းမောင်း ရိုက်နှက် တတ်ပါတယ်။
August မှာ လှပ ကျော့ရှင်းတဲ့ Marlena ဆိုတဲ့ ဇနီးချော တစ်ယောက် ရှိပါတယ်။ Marlena ဆိုတာ circus အဖွဲ့ထဲမှာတော့ နာမည်ကြီး စူပါ တစ်ယောက်ပါ။ Jacob ဟာ circus ထဲမွာ Marlena နဲ့ အနေ နီးခဲ့ပြီး မထင်မှတ်ပဲ Marlena နဲ့ သံယောဇဉ် ဖြစ် ချစ်ကြိုက် မိပါတယ်။
Circus ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ August ဟာ သူ့ရဲ့ ဇနီးချောနဲ့ Jacob တို့ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို သိသွားပြီး Jacob ကို သတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့ ပေမယ့် ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လူတွေ များနေလို့ Jacob တစ်ယောက် သက်သာရာ ရပြီး ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခွင့်ရ ခဲ့ပါတယ်။ Jacob တစ်ယောက် လွတ်ရာကို ထွက်ပြေး တိမ်းရှောင် ခွင့် ရခဲ့ ပေမယ့်လဲ အချစ်ကြီးတဲ့ အတွက် Circus ထဲကို ဘယ်သူမှ မသိအောင် ပြန်လာပြီး Marlena ကို ရအောင် ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်။
August တစ်ယောက် နဂိုထဲက Jacob ကို သတ်ချင်နေ ပေမယ့် အခွင့်အရေး မပေးလို့ မသတ် ခဲ့ရပေမယ့် ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ အလွတ်မပေးတော့ ပါဘူး။ August ကိုယ်တိုင် အပါ အဝင် August ရဲ့ တပည့်တွေနဲ့ပါ Jacob ရော Marlena ကိုပါ သတ်ဖို့ ကြိုးစားရင်း…
ဒါရိုက်တာ Francis Lawrence က best seller စာအုပ် တစ်အုပ် ဖြစ်တဲ့ Water For Elephants ကို 120 မိနစ် အရှည် ရှိတဲ့ Drama Romance ဇာတ်ကား အဖြစ် ရိုက်ကူးထားပြီး Reese Witherspoon, Robert Pattinson နဲ့ Christoph Waltz တို့က အဓိက ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ထားပါတယ်။
ရုပ်ရှင်အညွှန်း - Movie Review
IMDB 6.9 ရရှိထားတဲ့ဇာတ်လမ်းဟာ 2h ကြာမြင့်ပါတယ်။ 530 MB နဲ့အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီ။
ထိုင်းမင်းသား TONY JAA နဲ့ အခြားသောနာမည်ကြီးမင်းသားတွေပါဝင်ထားတဲ့ IMDB Rating (7/10) ရရှိထားတဲ့ ဟောင်ကောင်ထိုင်းအက်ရှင်ဇာတ်ကားပါ။ ချခန်းတွေကတော့ လုံးဝအကြမ်းပဲဆိုတာ မင်းသားကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ သိသာနေမှာပါ။
အက်ရှင်ပရိသတ်တွေအတွက် အမှန်အကန်အက်ရှင်ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားလေးတစ် ကားဖြစ်ပါတယ်။ လျှို့ဝှက် ရဲစုံထောက် ချန်ချီကစ် ဟာ မှုခင်းတွေကို ကြိုးကိုင် ညွှန်ကြားနေ တဲ့ မစ္စတာဟောင် ဆိုသူကို ဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့ အတွက် ဆေးသမား အယောင်ဆောင်ပြီး စုံစမ်းခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ ကစ် ရဲ့အခြေအနေမှန်ပေါ်သွားပြီး မျက်မြင် သက်သေလည်း ပျောက်သွားခဲ့ပါတယ်။ လူဆိုး ဂိုဏ်းအဖွဲ့ဟာ ကစ်ကို ပြန်ပေးဆွဲ ခဲ့ပြီး ထိုင်းမှာရှိတဲ့ အကျဉ်းထောင်ကို ပို့ပစ် ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီ အကျဉ်းထောင်မှာ ထိုင်း ရဲအရာရှိ ချက်တ်ချိုင် ဟာ အစောင့် တာဝန်ကျ ခဲ့ပြီး သွေးကင်ဆာ ဖြစ်နေ တဲ့ သမီးလေးအတွက် အရေးတကြီး ငွေ လိုအပ်နေသူပါ။ သူဟာ ကစ် ကို စောင့်ကြည့်ဖို့ အတွက် တာဝန်ပေးခံရပြီး အကျဉ်းသား နဲ့ ထောင်ဝန်ထမ်းဆို တဲ့ ဆန့် ကျင်ဘက် အခြေအနေကြောင့် တစ်ကြောင်း၊ ဘာသာစကားမတူ ညီတာကြောင့် တစ်ကြောင်း နှစ်ယောက်သား စကားတောင်မ ပြောကြပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ လည်း အခြေအနေ တစ်ရပ်က သူတို့ နှစ်ယောက်ကြား အပြောင်းလဲ ကြီးပြောင်းလဲ စေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါ ကတော့ ချိုင် ရဲ့သမီးလေး သွေး ကင်ဆာရောဂါ အတွက် ရိုးတွင်းခြင်ဆီ အစားထိုး ကုသဖို့ကို ကစ် က ကူညီပေးနိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ချိုင် ဟာ ကစ် အသက်အန္တရာယ် ကင်းနေစေဖို့ အတွက် အစွမ်းကုန်ကြိုးစားနေချိန် မှာတော့ ထောင်မှူး ကတော့ ကစ် ကို အသေသတ် နိုင်ဖို့ အရေးလုပ်ဆောင် ခဲ့ပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ လူဆိုးဂိုဏ်းချုပ်ကြီး မစ္စတာဟောင် က လူ့ ခန္ဓာကိုယ် အစိတ်အပိုင်းမှောင်ခိုမှုမှာ ပါနေတဲ့ အတွက် ကစ် ကိုထောင်မှာ သတ်ဖြတ်ပြီး ကိုယ်တွင်း အစိတ်အပိုင်း ထုတ်ယူချင်တဲ့ အတွက်ပါ။ တစ်ရက်မှာတော့ ကြိုးကိုင် နေသူ လူဆိုးကြီး မစ္စတာဟောင် ဟာ ထိုင်းမှာ လူလုံးပြဖို့ ဖြစ်လာခဲ့ ပါတယ်။ သူ အသက် ဆက်ရှင်ဖို့ အတွက် သူ့ညီ ရဲ့နှလုံး နဲ့ အစားထိုး ဖို့အတွက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘာအပြစ်မှ မရှိဘဲ ထောင်ကျနေတဲ့ ကစ် ဟာ ဟောင်ကောင်ရဲ တစ်ယောက် ဆိုတာ ချိုင် သိသွားခဲ့ တဲ့အပြင် သူ့ သမီးအသက် ကို ကယ်တင်ပေး မယ့်သူ ဖြစ်တာကြောင့် ကစ် ထောင်က လွတ်ဖို့အရေး ကူညီပေးခဲ့ ပါတယ်။ လူဆိုးခေါင်းဆောင် မစ္စတာဟောင် ကို ဖမ်းချင် တဲ့ ကစ်တစ်ယောက် အခွင့်အရေးကို အမိအရ ဆုပ်ကိုင်နိုင် မှာလား။ ချိုင်တို့ သားအဖ ကို ကစ် က တကယ်ကော ကူညီပေးနိုင် မှာလား ဆိုတာ ကိုယ်တိုင် ခံစားကြည့်လိုက် ပါဦးနော်။
IMDB7ရထားတဲ့ထိုင်း ဟောင်ကကောင် အက်ရှင်ဇာတ်ကားဟာ 2h ကြာမြင့်ပါမယ်။ 547 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:53:00 AM No comments:
Labels: Action, Asia, China, Crime, Thriller
ဘာလိဝုဒ်အက်ရှင်ဒရာမာဇာတ်ကားသစ်လေး အကြောင်း ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကို အတိုက်အခိုက်ချန်ပီယံရာဂက်ဟာဆီရာဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကို ရုပ်ရှင်ရိုက် ကွင်းတစ်ခုကနေ ပြန်ပေးဆွဲခေါ်ဆောင်သွားတာနဲ့ အစပြုထားပါတယ်။
ဆီရာရဲ့ အဖေက ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သမီးပျောက်ပြန်ရှာဖို့အတွက် ဘက်ပေါင်းစုံကကြိုးစားပေမယ့် ရာဂက်က သြဇာကြီးသူတစ်ယောက်ဖြစ်တာကြောင့် ဘယ်သူမှ မကယ်နိုင်ဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ သို့ပေမဲ့လည်း ရာဂက်ကို ယှဉ်နိုင်သူတစ်ဦးတော့ ရှိပါသေးတယ်။ သူကတော့ ရွန်နီဆိုသူပါ။
အဲဒီနောက် နောက်ကြောင်း ပြန်ဇာတ်ကွက်ဆီကိုပြန်သွားထားရာမှာ အသက် (၂၃)နှစ်အရွယ် ရွန်နီဟာ ဒေလီမြို့မှာနေတဲ့ ဆိုဆုံးမရခက်တဲ့ကောင်လေး တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး ကီရာလာမြို့က စည်းကမ်းတင်းကျပ်လွန်းတဲ့ကျောင်းကိုအပို့ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီ ကျောင်းကို ရထားနဲ့သွားတဲ့အခါ မှာ ဆီရာဆိုတဲ့ ထောင့်မကျိုးတဲ့ ကောင်မလေးတစ်ယောက်နဲ့ ဆုံခဲ့သလို ရာဂက်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်နဲ့လည်း တွေ့ခဲ့ပါတယ်။
ရာဂက်က ဆီရာကို မြင်မြင်ချင်းသဘောကျသွားခဲ့ပေမယ့် ဆီရာကတော့ ရာဂက်ကို စိတ်မ၀င် စားခဲ့ပါဘူး။ ကျောင်းရောက်တဲ့အခါမှာ ရွန်နီနဲ့အဆင်ပြေသွားတဲ့ အတွက်ရာဂက်နောက်ကောက် ကျသွားခဲ့ပါတော့တယ်။
အဲဒီနောက်လက်ရှိအခြေအနေ ပြကွက်ကိုပြန်ရောက်သွားပြီးရွန်နီဘန်ကောက်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာ ဆီရာကို ဖမ်းဆီးထားတဲ့နေရာကို စုံစမ်းရှာဖွေခဲ့ပါတော့တယ်။
ဆီရာနဲ့ ရွန်နီတို့ ရာဂက်လက် က လွတ်မြောက်နိုင်ပါ့မလား။ ရာဂက်ရဲ့ ဇာတ်သိမ်းခန်းကို ဘယ်လိုတင်ဆက်သွားမှာလဲ ဆိုတာ ဆက်လက်ကြည့်ရှုလိုက်ပါဦးနော်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ ရွန်နီအဖြစ် တိုက် ဂါးရှရော့ဖ်၊ ဆီရာအဖြစ် ရှရက်ဒါကာပူးရ်နဲ့ ရာဂက်အဖြစ် ဆူဒီယာဘူတို့က သရုပ်ဆောင်ထားကြပါတယ်။
IMDB 5.5 ရရှိထားတဲ့ ဇာတ်ကားဟာ 2h:13mins ကြာမြင့်ပါမယ်။ 619 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Labels: Action, Bollywood, Romance
အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ နာမည်ကျော်အဆိုတော် (Rock Star) တယောက်ဟာ ငယ်စဉ်ကတည်းက မိဘတွေအသက်ခံရတဲ့အတွက် စိတ်ဝေဒနာရှိနေပြီး မိဘများအတွက် လက်စားချေလိုစိတ် ပြင်းပြနေသူဖြစ်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့စိတ္တဇဆန်တဲ့ အပြုအမူတွေကြောင့် မီဒီယာတွေရဲ့ အာရုံစိုက်မှုကို အထူးခံနေရပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာမှ သတင်းထောက်မလေးတယောက်က သူများထက်စိတ်ဝင်စားမှုပိုတဲ့အတွက် အဆိုတော်ရဲ့ အနီးဆုံးပတ်သတ်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Rock Star အနေနဲ့ သူ့မိဘများအတွက် လက်စားချေနိုင်မလား၊ သတင်းထောက်မလေးကလည်း ဘယ်လိုကူညီနိုင်မှာလဲဆိုတာကိုတော့..................
IMDB 8.6 အထိတောင်ရထားတဲ့ အက်ရှင်ဇာတ်လမ်းကောင်းဖြစ်ပါတယ်။ 2h:50 ရှည်လျားပြီ 755 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 11:36:00 PM 1 comment:
Labels: Action, Bollywood, Mystery, Thriller
တရုတ်စာရေးဆရာမ Lisa See ရဲ့ အရောင်းရဆုံး ဝတ္ထုကို ရုပ်ရှင်ပြန်ရိုက်ကူးထားတာပါ။ ၁၉ ရာစုနှစ် အချိန်အခါက သွေးမတော်သားမစပ်တဲ့ မိန်းခလေး သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ရဲ့ တင်းကျပ်တဲ့ရိုးရာဓလေ့တွေကြားကဖြစ်တည်လာတဲ့ ကြီးမားတဲ့သံယောဇဉ်ကို ဖွဲ့ပြထားတာပါ။ တချိန်ထဲမှာပဲ ၂၁ ရာစုက သူငယ်ချင်းနှစ်ဦးရဲ့ အရင်းနှီးဆုံးသံယောဇဉ်ကိုလည်း ပြသထားပါတယ်။ အေးအေးလူလူကြည့်ရမယ့် Drama ကားကောင်းတကားပါပဲ။
IMDB 6.1 ရထားတဲ့ ဒရမ်မာကားဟာ 2h ကြာမြင့်ပါတယ်။ 338 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 10:15:00 AM No comments:
Labels: China, Drama, History
Posted by Y Junction at 7:15:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 10:07:00 PM No comments:
မိုးအေးအေးလေးမှာ ပျော်ပျော်ေ်လးကြည့်ရအောင် တရုတ်ဟာသကားတကားတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဟိုတယ်မှာ စီမံခန့်ခွဲရေးမန်နေဂျာမအသစ်ရောက်လာပြီး ဟိုတယ်ကို ကြယ် ၅ ဆင့် အဆင့်ဖြစ်အောင် စတင်လုပ်ဆောင်ပါတော့တယ်။ အရင်ဟိုတယ် ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ အဆင်သိပ်မပြေတဲ့ မန်နေဂျာမဟာ ဟိုတယ်ကို ပိုမိုပြီးလူသိများအောင် ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေး အဖွဲ့နှစ်ဖွဲ့ကို ဟိုတယ်မှာ တည်းခိုဖို့ဖိတ်ကြားလိုက်ပါတယ်။ အဓိကမင်းသမီးနှစ်ယောက်ပါလာပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကူးရေးတွေနဲ့ ဟိုတယ်ဝန်ထားတွေကြားမှာ ဘယ်လိုဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်လာမှာလဲ၊ ဟိုတယ်ကိုလည်း ကြယ်ငါးပွင့်ဖြစ်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်မလားဆိုတာကိုတော့..
ဇာတ်ကားထဲက မင်းသမီးလေး Karena Ng ကစွန်းချစ်ဖို့ကောင်းရောလားဗျာ..
IMDB 5.4 ရရှိထားတဲ့ဟာသဇာတ်ကားဟာ 1h:33mins ကြာမြင့်ပါတယ်။ 427 MB နဲ့ အောက်ကလင့်ခ်မှာ ဒေါင်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါပြီ။
Posted by Y Junction at 7:23:00 AM No comments:
Posted by Y Junction at 7:03:00 AM No comments: